Bit By Bit - agba nwere - 4.5.1.3 Mee gị onwe gị na ngwaahịa
-Ewu gị onwe gị na ngwaahịa bụ elu-ize ndụ, elu-ụgwọ ọrụ. Ma, ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ, ị pụrụ irite uru site a mma nzaghachi loop na-enyere pụrụ iche nnyocha.
Ewere obibia nke ewu gị onwe gị na nnwale otu nzọ ụkwụ n'ihu, ndị nnyocha ụfọdụ ewukwa ha onwe ha na ngwaahịa. Ndị a na ngwaahịa adọta sonyere, na mgbe ahụ na-eje ozi dị nyiwe maka nwere na ọzọ di iche iche nke nnyocha. Dị ka ihe atụ, otu ìgwè nke ndị nnyocha na Mahadum nke Minnesota kere MovieLens , nke na-enye free,-abụghị nke azụmahịa ahaziri nkiri kwe nkwa. MovieLens anam utom nọgidere kemgbe 1997, ma n'oge a 250,000 ụghalaahia ọrụ nwere nyere ihe karịrị nde 20 ratings banyere ihe karịrị 30,000 na fim (Harper and Konstan 2015) . MovieLens ada na-arụsi ọrụ ike obodo nke ndị ọrụ na-akpa àgwà magburu onwe nnyocha sitere na site anwale elekọta mmadụ na sayensị chepụtara banyere onyinye ka ọha na eze na akụ (Beenen et al. 2004; Cosley et al. 2005; Chen et al. 2010; Ren et al. 2012) na-agwa okwu algorithmic nsogbu na nkwanye usoro (Rashid et al. 2002; Drenner et al. 2006; Harper, Sen, and Frankowski 2007; Ekstrand et al. 2015) ; n'ihi na a zuru nyochaa ahụ Harper and Konstan (2015) . Ọtụtụ n'ime ndị a nwere agaraghị ekwe omume na-enweghị na-eme nnyocha na-enwe imecha ka a n'ezie na-arụ ọrụ ngwaahịa.
O di nwute na,-ewu gị onwe gị na ngwaahịa bụ incredibly ike, na ị kwesịrị ị na-eche banyere ya dị ka eke a mmalite-elu ụlọ ọrụ: elu-ize ndụ, elu-ụgwọ ọrụ. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe ịga nke ọma, nke a ji na-enye ọtụtụ nke akara na-abịa site ewu gị onwe gị na-enwe na nsiridi na sonyere na-abịa site na-arụ ọrụ ẹdude usoro. Ọzọkwa, a na obibia bụ nwere ike ike a mma nzaghachi akaghị ebe ọzọ nnyocha na-eduga ná a mma ngwaahịa nke na-eduga ọzọ ọrụ nke na-eduga ọzọ na-eme nnyocha na na (ọgụgụ 4.15). Ya bu, otu ugboro a mma nzaghachi akaghị kicks na, nnyocha ga-enweta mfe. N'agbanyeghị ihe ndị pụrụ isi na nke a obibia, m ike ịhụ ihe ọ bụla ọzọ ihe atụ nke ihe ịga nke ọma, nke na-egosi nnọọ otú o si esiri igbu ọma. Ma, m olileanya na nke a atụmatụ ga-aghọ ihe bara uru dị ka technology mma. Isi ike ndị a na-eke gị onwe gị na ngwaahịa pụtara na-eme nnyocha na-achọ ịchịkwa a ngwaahịa na-yikarịrị ka hà ga ibe na a ụlọ ọrụ, nke isiokwu m ga-ndikwọrọ.
Chepụta 4.15: Ọ bụrụ na i nwere ike ịga nke ọma na-ewu gị onwe gị na ngwaahịa, ị pụrụ irite uru site a mma nzaghachi loop: research-eduga ná a mma ngwaahịa nke na-eduga ọzọ ọrụ nke na-eduga ọbụna ihe nnyocha. Ndị a iche iche nke mma nzaghachi loops bụ incredibly ike ike, ma ha nwere ike nnyocha na-agaghị ekwe omume na uzọ ọzọ. MovieLens bụ ihe atụ nke a oru ngo nyocha nke nwere ihe ịga nke ọma na-eke a mma nzaghachi akaghị (Harper and Konstan 2015) .